हुम्लामा कहिले पुग्छ सिंहदरवार ?
काठमाडौं । हुम्लाको ताँजाकोट गाउँमा महामारी फैलिएको छ । रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखाला चम्किएको छ । २६ चैतमा फैलिन थालेको यो महामारीको उपचार गर्न न प्रदेश सरकार, न केन्द्र सरकारले नै चासो दियो । ९ जना मरिसके, २ सयभन्दा बढी सिकिस्त छन् । घरघरमा विरामी छन्, स्वास्थ्यचौकीमा ओखती छैन । जति गुहारे पनि कुनै सरकारले सुनेन ।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा नाम कहलाएको स्वास्थ्य विभाग भन्छ– स्वाइन फ्लू फैलिएको जस्तो छ । जस्तो भनेर बस्ने, हुम्लामा मान्छे मर्ने ? यस्तो गैरजिम्मेवार पनि सरकार हुन्छ ? खोई जनताप्रतिको जवाफदेहीता ?
महामारी फैलिएको पक्का हो । औषधिको व्यवस्था अझै हुनसकेको छैन । कुनै मेडिकल टिम गएको छैन । युवाहरु विदेश पलायन भएका छन्, गाउँमा जो छन्, असक्त छन्, बालबृद्धा छन् । सिंहदरवार भ्रष्टाचारमा डुबेपछि के लाग्छ ?